Chinese Tourists explore Zimbabwe - ZimOnline News
Home » Business » Chinese Tourists explore Zimbabwe
Posted by: Staff Reporter in Business, News May 17, 2019	0 876 Views
Government of Zimbabwe has invited the Chinese Tourists under the New Horizon Project marking commitment to the growth of the tourism sector.
Hundreds of Chinese Tourists have arrived in Zimbabwe to tour the country’s premier tourist sites. This is a monthly arrangement where hundreds of Chinese tourists visit some African States including Zimbabwe.
“The government has adopted various strategies to ensure sustainable long-term growth of the tourism sector”, President Mnangagwa said. The visit by the delegation is further proof of Zimbabwe as a safe tourist destination.
China has cooperated with Zimbabwe to accomplish various projects in the Southern African countries, among which include the Kariba South Hydro Power Expansion project which added 300 megawatts to the national grid and the expansion of Victoria Falls International Airport.
Previous: Chamisa grateful for Vimbai Tsvangirai’s recovery
Next: Tatelicious commemorates Transgender Day